वुहानमा नेपालीहरूकाे यस्तो दशा! भन्छन – बँगालदेशका साथीहरूले छाडेकाे खानेकुरा खादैछाै – PathivaraOnline
Home > प्रवास > वुहानमा नेपालीहरूकाे यस्तो दशा! भन्छन – बँगालदेशका साथीहरूले छाडेकाे खानेकुरा खादैछाै
admin February 2, 2020 प्रवास, समाचार	0
कोरोना भाइरसको उद्गमस्थल चीनको वुहानमा रहेका नेपालीलाई खानपिनको समस्या पर्न थालेको छ।भाइरसको त्रासका कारण हिँडडुलमा समेत बन्देज लागेको छ। पसलहरु बन्द छन्। सञ्चित खाना सकिन थालेको छ। अहिले श्रीलंकाली तथा बंगलादेशी साथीले दिएको खाना खाएर बस्नु परेको वुहान विश्वविद्यालयमा पीएचडी गरिरहेका नेपाली विद्यार्थी अशोक साहले भने। ‘श्रीलंका तथा बंगालादेशका साथीहरुलाई उनीहरुको सरकारले लगिसकेको छ।
जानेबेला उनीहरुले बचेको खाद्य सामग्री दिएका थिए। त्यही खाएर बसेको छु। अधिकांश विद्यार्थीको अवस्था यस्तै छ,’ उनले भने।१४ दिनदेखि भित्रै बस्नुपरेको छ। पाँच महिनाअघि नेपालबाट ल्याएको गेडागुडी अहिले काम लागिरहेको छ,’ उनले थपे, ‘बाहिर हिँड्ने त अवस्थै छैन। जहाँ गयो, त्यहीँ त्रास छ। चाँडो सरकारले नेपाल फर्काइदिए हुन्थ्यो।’
यस्तै हुवाजोङ युनिभर्सिटी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा एमडी गरिरहेका जागरनाथ साहले सरकारले आफूहरुलाई फर्काउन ढिलाइ गरेकोमा आक्रोश व्यक्त गरे।यहाँ बजार, दोकान सबै बन्द छ। चिनियाँहरु नै बाहिर निस्किँदैनन्। हामी तलसम्म झर्न पनि सकिरहेको छैनौँ। पसल खुल्दैन,’ उनले भने, ‘पचासौं सुपरमार्केटमध्ये एउटामात्रै खुला छ। त्यसमा पनि केही सामान छैन। सडेगलेका आलुपनि चर्को मूल्य तिरेर किन्नुपरिरहेको छ।’
उनी बसेको होस्टेलमा रहेकामध्ये १४–१५ जनामात्रै बाँकी रहेको उनले भने। ‘मेरो होस्टेलमा जर्मनीका एकजना मात्रै बस्थे। उनलाई पनि त्यहाँको सरकारले लगिसक्यो। हाम्रो सरकार के कुरेर बसेको छ खै?’ उनले प्रश्न गरे।पैसा तिर्न बाँकी रहेपनि यसपटक चीन सरकारले होस्टेलमा पानी–बिजुली नकाटेकाले केही राहत भएको उनले बताए। हरेक बिहान चिनियाँ सेना आएर ज्वरो नाप्ने गरेको उनले बताए।
फर्कन चाहनेको सूची प्रकाशित शनिबार बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासले नेपाल फर्कन चाहनेको आवेदन माग गरेको थियो। नेपाल फर्कन चाहने १८० जनाले आवेदन दिएका छन्। नेपाली दूतावासले उक्त सुची आइतबार साँझ प्रकाशित गरेको छ।
बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका उपप्रमुख सुशीलकुमार लम्सालले आवेदन परेकाहरुलाई २–३ दिनभित्र नेपाल ल्याइपुर्‍याउने बताए। ‘सरकारले जहाज चार्टर गरी स्वदेश फर्काउने तयारी गरेको छ। त्यो प्रक्रियामा रहेकाले २–३ दिन लाग्नेछ,’ उनले भने।सरकारले चीनबाट फर्किएका नेपालीहरुलाई १४ दिन छुट्टै राखी निगरानी गर्ने भनेपनि कहाँ राख्ने अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन। आफूहरु सम्भावित स्थानको खोजीमा रहेको स्वास्थ्यमन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले बताए।
‘चीनबाट आउने सबैलाई उताको विमानस्थलमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिने र नेपाल आइपुग्नेलाई पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रय विमानस्थलमा परीक्षण गरिनेछ,’ उनले भने, ‘संक्रमित ठहरिए उपत्यकाका तोकिएका अस्पतालहरुमा आइसोलेसन वार्डमा राखी उपचार गरिनेछ तथा अन्य यात्रुलाई दुई साता निगरानीका लागि छुट्टै स्थानमा राखिने छ।’आफूहरुलाई नेपाल फर्काउँदा सुरक्षित तवरले फर्काइयोस् भन्ने चाहना वुहानमा रहेका नेपालीहरुको छ।
‘अहिलेसम्म हामी स्वस्थ छौं। जाने बेला सुरक्षित तरिकाले लैजाओस् भन्न चाहान्छौं,’ अशोक साह भन्छन्, ‘नेपाल लगेर १४ दिन एक ठाउँमा राखिने भएपछि अध्ययन गर्ने, इन्टरनेसको व्यवस्था होस्।’हाल चीनबाहिर एक सय ४० सहित १४ हजार ४ सय ११ जना नोबेल कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन् भने ३ सय ४ जनाको ज्यान गइसकेको छ। ३ सय २८ जना निको भएर घर फर्केका छन्।